သင်္ချာ 24 - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်္ချာကဒ်များ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » သင်္ချာ 24 - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်္ချာကဒ်များ
သင်္ချာ 24 - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်္ချာ Card များကို APK ကို
သင်္ချာ 24 တစ်ဂန္ထဝင်သင်္ချာပဟေဠိဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဂိမ်းအားလုံးကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ဆင့်လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဂဏန်းသင်္ချာစွမ်းရည်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်္ချာကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေကူညီရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ မူလတန်းအဆင့်ကျောင်းသားတွေလည်းကစားနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့မူကားပင်သင်ကဘွဲ့ရကျောင်းသားများမှာအချို့မေးခွန်းများကိုဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ! - Play ရန်ကဘယ်လို
အဆိုပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင် (+) က4သို့ 24 နံပါတ်များကိုပေါင်းစပ်, အနုတ် (-), အမြှောက် (×) နှင့်ဌာနခွဲ (နရသူမင်း) ။4စေရန် 2048: ဥပမာ, ဤ 24 နံပါတ်များကိုသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ အဖြေ (2 + 0) × (4 + 8) = 24 ဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းလွယ်ကူသည်, သို့သော်အချို့မေးခွန်းများကိုအများကြီးပိုခက်သည်။ သင်ဤကြိုးစားကြနိုင်သည်6659 24.- အဆင့် Mode ကိုအောင်
15 အဆင့်ဆင့်နှင့်စုစုပေါင်း 300 ကောင်းစွာဒီဇိုင်းအဆင့်ဆင့်။ အဆိုပါအဆင့်ဆင့် "ကလေး" မှနျလှယျကူထံမှခက်ခဲဖို့ "သင်္ချာ၏ဘုရငျ", မှဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျမေးခွန်းတစ်ခုဖြေရှင်းမနိုင်လျှင်ညာဘက်ထိပ်မှာအကူအညီခလုတ်ကိုထိပါ။ တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်တွင်အကူအညီနဲ့ button ကိုသုံးစွဲဖို့3အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ်။
- မြန်နှုန်း Mode ကို
10 ကျပန်းမေးခွန်းများကို! သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ် 24 အဖြစ်အစာရှောင်ခြင်း Make! မေးခွန်းတစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့ညာဘက်ထိပ်မှာအမှိုက်သရိုက်ခလုတ်ကိုထိပါ။ တစ်ဦးချင်းစီဂိမ်းထဲမှာမေးခွန်းတစ်ခုကိုပြောင်းလဲ3အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့များနှင့်အောင်မြင်မှုများနှစ်ဦးစလုံးပေး - "24 Make" ဂိမ်းစင်တာကိုနှင့်အတူအပြည့်အဝပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဂိမ်းစင်တာကိုအင်္ဂါရပ်တွေကိုသင်ကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူသင့်ရဲ့ရမှတ်များနှင့်အောင်မြင်မှုများကိုမျှဝေခွင့်ပြုပါ။
- စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မြန်နှုန်း mode ကို
- အဆိုပါ App ကိုသင်တို့အဘို့သင့်လျော်သည်
- သင်ကဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေး, သင်္ချာဂိမ်းသို့မဟုတ်ပဟေဠိဂိမ်းနဲ့တူလျှင်။
- သင်ကသင်္ချာကျွမ်းကျင်မှု, အထူးသဖြင့်စိတ်ပိုင်းသင်္ချာကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေလိုလျှင်။
1 ။ app ကိုအရွယ်အစားကိုလျှော့ချ!
2 ။ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်
3 ။ bug fix
သင်္ချာ 24 - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်္ချာကဒ်များ
10.97 ကို MB
မင်္ဂလာ Monster မဟာမိတ်အဖွဲ့
သင်္ချာ - ဌာနခွဲ
တွက်ချက်မှုသင်္ချာ - …